Rasaasa News – Awdalstate: Maya Maamulka Soomaaliland
on December 6, 2014 12:00 am
Borame, Nov 6, 2014 – Ciidamo badan oo ay la socdaan cuqaasha beesha Samaroon iyo hogaaminta Awdal state oo mudooyinkanba isku uruursanayey Buuraleyda Awdal, ayaa sheegay in ay ka go,een maamulka Somaliland.
Suldaan Abiibakar Cilmi Wabar iyo cuqaal kale oo ay ciidamo weheliyaan ayaa baaq u diray maamulka Somaliland, dawlada federalka Somaliya, dawlada Atoobiya iyo dawlada degaanka Somalida Itoobiya.
Suldaan Abiibakar, ayaa maamulka Somaliland ugu baaqay in ayna soo fargalin arimaha beesha Samaroon iyo degaanadeeda, kalana baxaan maamulka ka jooga. Suldaanku wuxuu yidhi “Samaroon waa Soomaali waxayna sugaysay Somali xaalkeeda, wixii hada ka dambeeyan umana afduubnaandoonto beesha Isaaq.” Soomaali waxay ku tashato ayaanu kula tashan, anaga ayaana leh go,aanka dadkayaga iyo dhulkayaga.
Suldaanka, oo ay ka muuqato cadho badan iyo Jabhadnimo ayaa jooga meel duur ah, ayaa baaq u diray dawlada federalka ah ee Soomaaliya, isaga oo yidhi “Soomaali baanu nahay, diyaarna uma nihin in aanu ka tagno Soomaaliya.”
Xogo hoose aan ka helay Borame ayaa tibaaxay in ay wada joogaan cuqaasha gabalka iyo gudiga fulinta ee Awdal state meel aan sidaas uga fogayn magaalada. Halkaas oo ay ku shireen ka dibna Suldaan Abibakar ka sheegay go,aanka isaga oo ku hadlaya afka odayaasha gabalka.
Suldaanka, ayaa dawlada Atoobiya u sheegay in ay jecel yihiin xasiloonida gabalka iyo ilaalinta xuduuda dheer ee u dhaxaysa Awdal state iyo Atoobiya.
Suldaanku wuxuu carabka ugu adkeeyey in ay jecel yihiin in ay xidhiidh wanaagsan la yeeshaan dawlada degaanka Soomaalida Atoobiya, isaga oo aad u amaanay madaxwaynaha dawlada degaanka Soomaalida Atoobiya Cabdi Maxamuud Cumar.
Hadalka Suldaanka waxaa laga dareemayey in uu jiro xidhiidh ka dhaxeeya dawlada degaanka Soomaalida Atoobiya iyo maamulkooda, Atoobiyana arinta ogtahay.
Xidhiidhka u dhaxeeya Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ayaan wanaagsanayn afartii sano u dambeeyay. Waxaana xidhiidhka xumaaday loo aanaynayaa isbadalka iyo deganaanta siyaasadeed ee ka jirta degaanka Soomaalida Itoobiya.
Warbaahinta maamulka Soomaaliland ayaa si badheedh ah qoraalo iyo dacaayado afka ah la beegsada masuuliyiinta degaanka Soomaalida Itoobiya. Waana wax dhici kara in masuuliyiinta degaanku ay saaxiib dhaw ka dhigtaan maamulka Awdal state, maadaama beel ahaan dadka reer Awdal State ku awood badan yihiin degaanka Soomaalida Itoobiya.
Dadka reer Awdal state ayaa sheegta in ay dhibaatooyin xoog leh ku qabaan maamulka Soomaaliland, wax walba oo xumaan ahna lagu sameeyo, laakiin ay nabad jacayl darteed dulqaad ugu yeeshaan dhibaatada.
Arimahan iyo culaysyada siyaasadeed ee saaran Soomaaliland, ayaa laga yaabaa in uu soo da-dajiyo isbadal ku yimaada qaabdhismeedka siyaasadeed ee maamulka Soomaaliland.